ပရိဘောဂ Cam Lock ကိုစွဲစေထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်း - တရုတ်စက်ရုံ - Cixi Wenap အင်တာနေရှင်နယ်ထရေးဒင်း Co. , Ltd မှ
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > စွဲစေနှင့်ပိုက် Clamp > ပရိဘောဂများအတွက်စွဲစေ > ပရိဘောဂ Cam Lock ကိုစွဲစေ
ပရိဘောဂ Cam Lock ကိုစွဲစေ
WENAP စီးရီး, ကီးဘုတ်စီးရီး, ပရိဘောဂသော့ခလောက်, ပလပ်စတစ်အလှဆင်နှင့်အခြားဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များအပေါ်တွင်မူတည်, လျောက်ပတ်စီးရီး, သေတ္တာစီးရီး, အခွံမာသီးများနှင့်သော့ခလောက်စီးရီးချိတ်ဆက်ပရိဘောဂ, ထိုကဲ့သို့သော caster ဘီးစီးရီးအဖြစ်, ပရိဘောဂဟာ့ဒ်ဝဲအတွက်အထူးပြုသောကုန်သွယ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါပရိဘောဂ Cam Lock ကိုစွဲစေ၏ကုန်ပစ္စည်းမိတ်ဆက်
သင်သည်သင်၏လာမည့်စီမံကိနျးအတှကျ cam connectors သို့မဟုတ်စွဲစေလိုအပ်သည့်အခါမျှထပ်မံWENAPâ€™်ဟာ့ဒ်ဝဲထက်ကြည့်ရှုပါ။ ကျနော်တို့အများကြီး application များအတွက် cam connectors နှင့်စွဲစေတဲ့ကျယ်ပြန့်မျိုးစုံသိုလှောင်။ အဆိုပါ WENAP စီးရီးငျ RTA (စုဝေးဖို့အဆင်သင့်) ပရိဘောဂ, ရှိုးပြပွဲနှင့်ဗီရိုစနစ်များများအတွက်စုံလင်သည်။ သငျသညျသစ်သား Dowel, ဘီစကွတ်, ပူးတွဲစွဲစေရှာနေနေတယ်ဆိုရင်, တစ်ပိုင်းဖုံးကွယ်ကက်ဘိနက်အရင်းသို့မဟုတ်ဖန်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်ကလစ်များ, weâ€ငျသညျဖုံးအုပျတယ်မ™။
အဆိုပါပရိဘောဂ Cam Lock ကိုစွဲစေ၏ကုန်ပစ္စည်း Parameter
M2-M 16, 350mm နှင့်အတူအရှည်, ငါတို့သည်လည်းဖောက်သည်ရဲ့ဒီဇိုင်းအရသိရသည်ထုတ်လုပ်နိုင်သည်
က ISO, GB ကို, Din, JIS ဘီ, ANSI, BSW, IFI က Non-စံ
အေး Forge ခေါငျးစဉျအောကျ / က Secondary စက် / ညှပ် / Threading / Surface ကကုသမှု / (အလိုအလျောက်) စမ်းသပ်ခြင်း / (အလိုအလျောက်) Pack / Shipping
ကာဗွန်သံမဏိ, သံ, သံမဏိ, ကြေးဝါကြေးနီ, လူမီနီယမ်, ဇင့်အလွိုင်း, ကြေး
Zn-ချထားတဲ့, Ni-ချထားတဲ့, passive, H.D.G ။ (ပူသို့ကျဆင်းလာ galvanizing), chromatic, Chorm ချထားတဲ့, Blackoxide, ပိုလန်, ရိုးရိုး, Coppercoated, ကြေးဝါများတွင်လည်းကောင်း, Dacromet, anodic ဓာတ်တိုးစသည်တို့ကို
ဒါပေါ်ဦးခေါင်း, ပတ်ပတ်လည်ဦးခေါင်း, recessed ဦးခေါင်း, ဘောလုံးကိုခေါင်း, ခလုတ်ကိုဦးခေါင်း, ပြားချပ်ချပ်ဦးခေါင်း, fillister ဦးခေါင်း, ဘဲဥပုံဦးခေါင်း, ဒိုင်းခွေခေါင်း, countersunkhead, ပြီးအင်တင်းခဲ့သည်အနား6ဘက်ရှိပုံဦးခေါင်း, hex အနားကွပ်ဦးခေါင်း, စတုရန်းခေါင်းကို T-ဦးခေါင်းပန်နှင့်
slot, Phillips က, Phillips ကတမ်ယဉ်, ရင်ပြင်, Square ကိုရပ်နား slot, Quadrex, Pozi, TORX, hex socket, Tri-တောင်ပံ, Spanner, တစ်ခုမှာလမ်းဖယ်ရှားရေးကိရိယာတခုနှင့်ဒါပေါ်မှာ။
1. ယှဉ်ပြိုင်စျေးနှုန်း; ရရှိနိုင်ပါ 2. OEM ဝန်ဆောင်မှု
ကြိုတင်မဲအတွက်ယေဘုယျအားဖြင့် 30% T / T, B / L ၏မိတ္တူကိုဆန့်ကျင် 70%
ကုန်ပစ္စည်း Feature ကိုနှင့်ပရိဘောဂ Cam Lock ကိုစွဲစေ၏လျှောက်လွှာ
1. အဆင့်:SUS201, SUS304, SUS316, A2-70, A2-80, A4-80,4.8 6.8 8.8 10.9 12.9
2. Size:M2-M 16, 350mm နှင့်အတူအရှည်, ငါတို့သည်လည်းဖောက်သည်ရဲ့ဒီဇိုင်းအရသိရသည်ထုတ်လုပ်နိုင်သည်
3. နျ Standard:က ISO, GB ကို, Din, JIS ဘီ, ANSI, BSW, IFI က Non-စံ
အဆိုပါပရိဘောဂ Cam Lock ကိုစွဲစေ၏ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်
အသေးစိတ်ထုတ်ပိုး:စက္ဏူထူ: * 24 32 * 14cm / 24 * 21 * 14cm Pallet: * 110 110 * 12cm (ငါတို့သည်သင်တို့၏တောင်းဆိုမှုများကိုအညီထုပ်ပိုးနိုငျသညျ)
hot Tags:: ပရိဘောဂ Cam Lock ကိုစွဲစေ, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, တရုတ်ခုနှစ်တွင်ဖန်ဆင်း, လက်ကား, စတော့အိတ်များတွင်ယ်ယူရန်အကောက်ခွန်, အစုလိုက်, စျေး, Pricelist, စျေးနှုန်း, High Quality
ပရိဘောဂများအတွက် angle bracket